एन्ड्रोइड १२ भर्सेस आईओएस १५ : कुन अब्बल ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, १३ श्रावण बुधबार
एक वर्षसम्म सित्तैमा फाइभजी अनुभव गर्न पाइने, यस्तो
काठमाडाैं । एप्पलले हालै मात्र डब्लूडब्लूडीसी २०२१ मार्फत नयाँ आईओएस अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अपडेटसँगै आईफोनमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिनेछ ।
यसपटक एप्पलले नोटिफिकेसनलाई व्यवस्थित गर्दै प्राइभेसी तथा पर्सनलाइजेसनमा निकै ध्यान दिएको छ । त्यसो त यसले अघिल्लो अपरेटिङ सिस्टम आईओएस १४ जति ठूलो बदलाव ल्याएको छैन ।
तर प्रयोगकर्ताका लागि भने धेरै हदसम्म नयाँपन यसमा छ । यसैगरी एन्ड्रोइड १२ को बारेमा समेत चर्चा सुरु भएको छ । एन्ड्रोइडमा गुगलको वार्षिक अपग्रेडको रुपमा गत वर्ष आईओएस १४ जस्तै भारी परिवर्तन देखिएको थियो ।
पिक्सेल फोनमा त्यो परिवर्तन सहजै देख्न सकिन्छ । जुन गुगलले अब एन्ड्रोइडमा समेत ल्याउँदै छ । गुगलले पनि आफ्नो प्राइभेसी नीतिलाई मजबुत बनाएको छ । साथै अपरेटिङ सिस्टममा थुप्रै नयाँ चिजहरु जोडिएको छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने एन्ड्रोइड १२ मा धेरै नयाँ अपडेटहरु देख्न सकिन्छ । आज हामी कुन अपरेटिङ सिस्टममा बढी फिचर रहेका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै छौं ।
एप्पलले आईओएस १५ को साथमा आईफोनमा यस वर्ष निकै धेरै परिवर्तनहरु ल्याएको छ । एप्पलले दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि ससाना कुराहरुमा धेरै ध्यान दिएको छ । यसपटक नयाँ स्टिल वालपेपर तथा रिडिजाइन नोटिफिकेसनसँगै इन्टरफेसमा समेत परिवर्तन गरेको छ ।
यस वर्ष एप्पलले नोटिफिकेसनमा धेरै नै काम गरेको छ । अब प्रयोगकर्ताले डीएनडी, ड्राइभिङ, वर्क, होमको रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार पार्न सक्छन् । यीमध्ये कुनै पनि प्रोफाइल चयन गर्दा आईफोनले त्यसमा भएका नोटिफिकेसन मात्र तपाईंलाई पठाउनेछ । जुन नोटिफिकेसन तपाईंलाई अनावश्यक लाग्छन्, त्यस्ता नोटिफिकेसन आउने छैनन् ।
साथै एकसाथ सबै नोटिफिकेसनलाई देख्न सकिने विकल्पसमेत दिइएको छ । यसपटक नोटिफिकेसन यूआईलाई एन्ड्रोइडको जस्तै बनाइएको छ । जसले गर्दा फोनमा तपाईंको नियन्त्रण बढी हुनेछ । यदि तपाईं डीएनडी इनेबल गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई ‘आईमेसेज’ मा म्यासेज पठाउने प्रयोगकर्तालाई तपाईंको डीएनडी अवस्थाको बारेमा स्वतः जानकारी पुग्नेछ ।
यसबाहेक फेसटाइममा पनि निकै परिवर्तन देख्न सकिन्छ । जस्तै ब्याकग्राउण्ड न्वाइज रिडक्सन, भिडियो कलिङमा पोट्रेड मोड इफेक्ट र ग्रुप कलमा ग्रिड भ्यू उपलब्ध छ । ‘शेयर प्ले’ को माध्यमबाट आईफोन प्रयोगकर्ताले भिडियो कलमार्फत एकसाथ भिडिओ हेर्न वा म्युजिक सुन्न सक्छन् ।
यसबाहेक एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले वेब ब्राउजरको माध्यमबाट फेसटाइम लिङ्कमार्फत फेसटाइम कल समेत गर्न सक्छन् । यसबाहेक सफारीमा स्मार्ट ट्याप म्यामेजमेन्टमा परिवर्तन गरिएको छ । सर्च बारलाई सबैभन्दा तल राखिएको छ । जसबाट तपाईं अर्कोमा जानका लागि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ ।
क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने अन्य एपमा कपी गर्ने वा नोट्सको रुपमा सेभ गर्नका लागि फोटोबाट टेक्स्ट स्क्यान गर्न सकिन्छ । स्पटलाइट सर्चले अब त्यस्ता फोटो तथा वेबको जानकारी देखाउँछ, जुन तपाईंका लागि महत्वपूर्ण छन् ।
सिरीको प्रयोग अफलाइनमा समेत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै प्राइभेसीको कुरा गर्ने हो भने तपाईंले इन्स्टल गरेका सबै एपले तपाईंको डेटा कहाँ सेभ भइरहेको छ र त्यसलाई कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनेछ ।
आईओएस १५ अपडेट ‘आईफोन सिक्स एस’ पछिका नयाँ मोडेलमा उपलब्ध हुनेछ । जसमा आईफोन सेभेन सिरिज, आईफोन एट सिरिज, आईफोन एक्स, आईफोन एक्स एस सिरिज, आईफोन एक्स आर, आईफोन इलाभेन, आईफोन ट्वेल्भ, आईफोन एसई, आईफोन एसई २०२० र आईपड टच सेभेन्थ जेनेरेसन रहेका छन् ।
एन्ड्रोइड १२ मा यसपटक प्राइभेसीमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिइएको छ । एन्ड्रोइडले डिजाइन थिममा समेत निकै ध्यान दिएको छ । यस वर्ष एन्ड्रोइड १२ अन्य कुनै पनि कस्टम स्क्रिनभन्दा अलग देखिन्छ । यसमा भारी मात्रामा विजेट तथा आकर्षक नोटिफिकेसन शेड राखिएको छ ।
अब लक स्क्रिन एओडी तथा होमस्क्रिनमा फोन वालपेपरको कलरदेखि कलरको बेस तयार गर्नेछ । कयौं थिम डार्क वा लाइटको साटो कलरमा आधारित हुनेछन् । साथै मेटेरियल यू डिजाइन थिम भने पिक्सेलमा मात्रै सीमित हुनेछ । यसपटक नोटिफिकेसन शेडदेखि गुगल प्ले तथा होम कन्ट्रोलमा सहजै एक्सेस बनाउन सकिनेछ ।
यसपटक गुगल असिस्टेन्टलाई पावर बटन दुई पटक दबाएकै भरमा एक्सेस गर्न सकिने बनाइएको छ । साथै एन्ड्रोइड १२ मार्फत गुगलले फास्ट काम गर्नेछ । सीपीयूको समय २२ प्रतिशत कम हुनेछ र नयाँ एनिमेसन अनुभव फरक फरक स्तरमा चल्नेछ । एन्ड्रोइड टिभी रिमोट अब डिफल्ट रुपमा सिस्टमबाटै सेट गरिएको छ ।
अब क्रोम ब्राउजरले तपाईंलाई पासवर्डको जानकारी दिनेछ र गुगल असिस्टेन्टले तपाईंलाई आवश्यक पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गर्न सल्लाह दिनेछ । एन्ड्रोइड १२ मा आईओएस १४ को जस्तै एउटा नयाँ प्राइभेसी ड्याशबोर्ड एप दिइएको छ । जसले कुन एपले सेन्सरको माध्यमबाट निजी डेटा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा चेक गर्नेछ ।
यद्यपि यसले आईओएस १५ को जस्तै वेबसाइट ट्र्याक भने गर्दैन । एपको प्रयोगको दौरान प्राइभेसी इन्डिकेटरले प्रयोगकर्ताको डिभाइस सेन्सर एक्सेसको बारेमा जानकारी दिनेछन् । गुगलले समेत सबै कलरका प्रयोगकर्ताको लागि सहज बनाउन क्यामेरा एल्गोरिदमलाई सुधार गरिरहेको छ ।
एन्ड्रोइड १२ अपडेट पिक्सेल थ्री सिरिज, पिक्सेल थ्री ए सिरिज, पिक्सेल फोर सिरिज, फिक्सेल फोर ए सिरिज र पिक्सेल फाइभ सिरिजमा काम गर्नेछ । यस बाहेक एन्ड्रोइड साझेदारमा समेत निर्भर हुन्छ । एन्ड्रोइड १२ को सपोर्ट कुन डिभाइसमा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा त्यसैअनुसार तय हुन्छ । वनप्लस, साओमी, एसुस, ओप्पो र रियलमीले बेटमा भाग लिएका छन् ।
काठमाडौं । अबको एक महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालय पूर्ण स्वचालित (अटाेमेसन) हुनुपर्ने भएको छ ।
दूरसञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका यी ५ कम्पनी, जसले जारी गर्दैछन् आईपीओ
काठमाडौं । यतिबेला शेयर बजार उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यहीअनुसार बजारमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा पनि
किन जरुरी छ सबैले एआई प्रविधि सिक्न ?
नेपाली युवा वैज्ञानिक डा समीर मास्केले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित कम्पनी फ्युज मसिन स्थापना
सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित सवडिलरलाई डिशहोमको राहत
प्रधानमन्त्रीका हरेक कामको अपडेट अब भाइबरमै
फोन पेको ‘आम्मामामा’ अफर, हरेक दिन एक लाख जित्ने अवसर